Soomaalida oo turjumaan ka dhigato caruurta yar-yar. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Soomaalida oo turjumaan ka dhigato caruurta yar-yar.
In turjumaan laga dhigto caruurta yar-yar waa arin ay ka wada simanyihiin ajaaniibta wadanka oo dhan, balse waxaa si gaar ay arintan ugu baahsantahay soomaalida. Luuqada norwiijiga oo ay waaliduunta aysan sifiican ugu hadli karin iyo in ay ku kalsoonyihiin caruurtooda ayaana kamid ah sababaha ugu waaweyn ee sababta arintan. Waxa ay waaliduunta caruurta u wadaan xafiisyada nav, iskuulada, dhakhtarada iwm.
In caruurta ay u turjumaan waa arin aan habooneyn, ilmuhu waxay helayaan macluumaad aysan habooneyn inay ogaadaan, waxayna wax u dhimi kartaa xiriirka ka dhexeeya ilmaha iyo waalidka.
Ka waran hadii macalinka iskuulka uu rabo inuu fariin u gudbiyo waalidka ilmaha, fariintaas oo uusan jecleysan ilmaha. ma u maleenaysaa inuu ilmahaas fariinta iyo hadalka macalinka sida ay tahay u gudbinayo, mise wax ayuu ka badalayaa si uu u qanciyo waalidka?
Les mer om saken på norsk her:
Previous articleMalik Yusuf(wiil soomaali ah) oo loo xiray dil uu gaystay 14 sano kahor
Next article23-jir soomaali ah oo qirtay inuu ku biiray una soo dagaalamay Daacish